साताको तस्वीर : ‘ट्यालेन्ट अफ भिलेज’ – ebaglung.com
साताको तस्वीर : ‘ट्यालेन्ट अफ भिलेज’
२०७४ आश्विन २३, सोमबार १५:३१	Footer Slider, Full Slider, Top News, अन्य समाचार, विचित्र
विजय राना, बागलुङ २०७४ असोज २३ । बागलुङको काठेखोला गाउँ पालिका वडा न. ४ मा सञ्चालित ‘गाउँमैत्री अक्षय कोष’ले हालै मात्र आफ्नो आठौँ संस्करण सफलता पूर्वक सम्पन्न गरेको छ । अक्षय कोषको नारा नै छ ‘हाम्रो उच्च शान, प्रतिभाको सम्बर्धन’ । नारा अनुरुप नै अक्षय कोषले प्रत्येक वर्ष सञ्चालन गर्छ ‘ट्यालेन्ट अफ भिलेज’ कार्यक्रम । विशेष गरि ट्यालेन्ट अफ भिलेज कार्यक्रमले काठेखोला गाउपालिकामा रहेका नव प्रतिभाको पहिचान र प्रतिभा प्रस्फुटन गर्नको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ । त्यस क्षेत्रमा नव प्रतिभा जन्माउने सवालमा अक्षय कोषले अत्यन्त महत्वपूर्ण भुमिका खेलिरहेको छ ।
गाउँमैत्री अक्षय कोष (GMAK) प्रगतिशिल विवाहको एक उपज हो । तंग्रामका युवा जन गायक हेमराज आश्रम र बरेङ गाउँ पालिकाकी नृत्याङ्गना सुप्रभा थापाको बिच भएको प्रगतिशिल विवाहको अवसरमा स्थापना गरिएको अक्षय कोष नव प्रतिभाहरुको पहिचान तथा प्रस्फुटनको लागि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान बनिरहेको छ । पूराना कलाकारहरुले पनि आफ्नो कला तथा प्रतिभा प्रस्फुटनका लागि अत्यन्त राम्रो अवसरको रुपमा बुझ्ने गरेका छन् । खासमा ‘ट्यालेन्ट अफ भिलेज’ कार्यक्रममा ३ विद्यामा प्रतिभा प्रस्फुटन गरिन्छ, जसमा १) गायन २) नृत्य ३) साहित्य (गजल) । यसमा ९ वर्ष देखि ४५–५० वर्षको उमेर सम्मकाले प्रतिभा प्रस्फुटन गर्दछन् । २०६६ सालमा स्थापना भएको गाउँ मैत्री अक्षय कोषले सञ्चालन गर्ने ‘ट्यालेन्ट अफ भिलेज’ कार्यक्रम कलाप्रेमी र स्थानीयहरुको लागि प्रिय बन्दै गइरहेको छ । व्यक्तिगत रुपमा स्थापना गरिएको अक्षय कोषले समाज प्रतिको उत्तरदायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै प्रतिभा प्रस्फुटनमा पु¥याएको योगदान महत्वपूर्ण छ ।
गाउँ मैत्री अक्षय कोष अहिले वृहत योजनाका साथ अगाडी बढिरहेका छ । संस्थाका संरक्षक हेमराज आश्रमका अनुसार संस्थाले विभिन्न योजना बनाइरहेको छ । संस्थाले तंग्राममा नै संगितको पुस्तकालय र संग्रालय बनाउने योजना बनाइरहेको छ । संग्राहलयमा देशभरका गित, संगित तथा विभिन्न समुदायमा भएका गित, संगित तथा संस्कृतिको संरक्षण गरिने छ । संग्राहलय तथा ट्यालेन्ट अफ भिलेज कार्यक्रमको लागि संस्थाले जग्गा समेत खरिद गरिसकेको छ । यो काठेखोला गाउँ पालिकाको लागि मात्र होइन सिङ्गो जिल्लाकै लागि सुखद पक्ष हुन सक्छ । संगित संग्राहलयकै कारण बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक भित्राइ स्थानीयको लागि राम्रो आम्दानी गर्ने वातावरण पनि बन्न सक्छ । अहिले कोषमा जम्मा ३ लाख रुपैयाँ छ । तर योजना सफल बनाउन विभिन्न ठाउँमा सहयोग माग्ने, च्यारिटि सो गर्ने, देउसी भैलो खेल्ने योजना छ आश्रम संग ।
उत्कृष्टहरु राष्ट्रिय पहिचान बनाउँदै
ट्यालेन्ट अफ भिलेजका केही उत्कृष्टहरु राष्ट्रिय रुपमा नै पहिचान बनाई सकेका छन् भने कोही संघर्षरत छन् । ट्यालेन्ट अफ भिलेज कार्यक्रमले जन्माएका मध्ये संस्करण एकका बिजेता विश्वास खड्काथोकी जिल्ला स्तरका विभिन्न सञ्चार गृहमा काम गर्दै नयाँ पत्रिका राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका कार्यरत हुनुहुन्छ । दोस्रो संस्करणको बिजेता अम्बिका पुन गित तथा संगितको क्षेत्रमा नै आफ्नो पहिचान स्थापित गर्नमा संघर्षरत हुनुहुन्छ । अम्बिका अहिले व्यवसायिक रुपमा नै संगितमा लागिरहनु भएकोछ । संस्करण ४ को बिजेता सुगम थापा सोही बाटोमा उन्मुख हुनुहुन्छ । अनिता थापा, प्रविना रोका, शुष्मा आले लगायतका कलाकारहरु निरन्तर संघर्षरत हुनुहुन्छ । त्यसकारण पनि अक्षय कोषले जुन कार्य गरेको छ, त्यो सह्रानीय छ । यसलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ भने प्रतिभा पहिचान तथा प्रस्फुटनको लागि अन्यत्र पनि यस्ता कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ ।
थप समन्वय आवश्यक
संस्थाले लिएको लक्ष पुरा गर्नको लागि स्थानीय तहमा थप समन्वयको आवश्यक छ । स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, जनता र स्थानीय राजनितिक दलको असहयोगले संस्थाले लिएको महत्वपूर्ण लक्ष हासिल गर्न कठिन हुन सक्छ । आफ्नो लक्षलाई समयमा नै पुरा गर्नको लागि संस्थाले त्यस तर्फ ध्यान दिनेछ । यदि त्यसो गर्न सकेको खण्डमा संस्था सफल हुनेछ आठाँैँ संस्करणका अतिथिहरुको त्यही कुरामा जोड थियो । अवश्य आयोजक त्यस कुरामा सचेत हुनेछ ।
प्रदेश कमिटीले स्थायी कमिटीमा कस्लाई सिफारिस गर्ला ? यस्तो छ, बागलुङ एमालेको बास्तविकता !
शुभ दीपावली एवं दुदिलाभाटी युवा क्लबको वार्षिकोत्सवमा विविध कार्यक्रम गरिदै